Tirakoobka guryaha Muqdisho oo bilowday
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamud Axmed Nuur (Tarsan) oo u waramay Warlalis ayaa waxa uu sheegay inay bilaabeen tira koobka guryaha ku yaalla 5 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir.
Tarsan ayaa sheegay in hada ay socota tirinta guryaha ku yaalla 5 degmo oo kala ah Xamar weyne, Xamar jajab, Shingaani, Waabari iyo Hodan kuwaasi oo uu sheegay inay tiri doonaan dadka ku nool lab iyo dhadig iyo guryaha inta ay yihiin.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ujeedada ay ka leeyihiin arintaani ay tahay in lagu xaqiijiyo amaanka magaalada Muqdisho si loo ogaado marka ay magaalada ka dhacaan waxyaabo amaanka lidiga ku ah sida dilka qofka gaysta oo loo soo saaro.
Marka lasoo gabagabeeyo ayaa waxa uu sheegay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan in ay guda gali doonaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir kuwaasi oo ay iyana uu sheegay inay tira koobayaan guryaha ku yaalla iyo dadka ku nool.
Hadalkaani ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo magaalada Muqdisho ay ka dhacaan falal lidi ku ah amaanka magaalada sida dilal iyo qaraxyo.